Daraartuu Tulluu pirezdaantii ittaantuu durfamtuu ta'uun filatamte
Fiigicha meetira kuma 10n yeroo jalqabaaf Afrikaafi Itoophiyaa, olompikii Baarseeloonaatti meedaaliyaa warqii tan argamsiste gootiittiin Olompikii Koloneel Daraartuu Tulluu fuulashee gara oggansaatti garagalfachuun Dursituu Pirezdaantii Ittaantuu Federeeshinii Atileetiksi Itoophiyaa ta'uun filatamte.
Daraartuun kan filamte yaa'ii arifachisaa federeeshinichi Dilbata darbe adeemsiseen qajeelfama federeeshinichi oggantoota dubartootaa dabaluuf karoorfatee tureen ta'uun beekameera.
Haaluma kanaan naannoleen kilaboota shaniifi isaa ol qaban bakka bu'oota lamaan hirmaachuu ni danda'u qajeelfama jedhuun Naannoon Oromiyaa Koloneel Daraartuu dhiheessuun filannoo adeemsifameen sagalee guutuudhaan filatamuu ishee ibsameera.
Koloneel Daraartuun Koree Olompikii Itoophiyaaf miseensa raawwachiiftuu hojii ta'uudhaan bara darbeerraa kaasee Oromiyaa bakka bu'uun filamuun ishee kan yaadatamuudha.
Akkasumas koree gaggeesituu hojiif filannoo taasifameen Oromiyaa bakka bu'uun kan dorgoman Aadde Aziizaa Abdiifi Affaariin baka bu'uun kan dorgoman Aadde Fooziyaa Idiriis sagalee walqixaa argachuusaanitti sagalee yeroo lammaffaaf kennameen bakka buutuun Affaar Aadde Fooziyaa Idiriis filatamaniiru.
Torban kana/This_Week 17535
Guyyaa mara/All_Days 1442315